I-TOM BIHN inomsebenzi owusizo wokunqoba ukuphikisana kwentengo ku-FAQ vrae
Ukuze uthole ukuthi yini egcina izilaleli zakho zingathengi, zama ukwenza ucwaningo noma izingxoxo zomuntu ngamunye ngamakhasimende akho namakhasimende akho wamanje.
… lezi yizo zonke izingcingo ezenzweni (GTA’s).
Umbhali nomqeqeshi u-Elna Kairo gebruik iziphazamiso futhi wagxila kwiwebhusayithi yakhe nakwibhulogi kunhloso yakhe julle # 1.
Umlobi Elna Kain wenza umsebenzi omkhulu ngalokhu kwiwebhusayithi yakhe. Kuyacaca ukuthi umgomo wakhe we- # 1 ukuletha abantu ukubhalisela inkambo yakhe entsha ye-imeyili ngokuqala abalobi bokuzimela. Indawo yakhe igxile kulowo mgomo nge:
Ukubeka "i-Free kursus" njengendlela yokukhetha imenyu yokuqala
Lokho akusho ukuqeda konke okuthunyelwe nge "Siyabonga ngokufunda, manje Thenga umkhiqizo wami! "
Ungasebenzisa futhi ama-CTA ukuze ukhuthaze abafundi ukuba babeke amazwana, babelane ngokuthunyelwe nabangani, bakulandele kuma-sosiale media, njll. Lezi yizindlela ezinhle zokubandakanya abafundi abaqotho nokwakha izethameli zakho.
Yingakho izincwadi ze-imeyili zinamandla kakhulu. Ziyindlela versterk yoku:
Ukubhalisa kwi-nuusbrief kuyingozi kakhulu, ngokungafani nokunikeza imininingwane yabo yekhadi lesikweletu kusayithi elisha, noma ukusebenzisa imali enkambeni abangaqiniseki ukuthi bayayidinga. Ukuze uphendule labo abafundi abangajwayelekile kumakhasimende (bese uthola ukuthi bangabalandeli bakho abahle ngempela), iphephandaba lilungile.
Ukuze uguqulwe, cela abafundi bakho ukuba babhalisele i-nuusbrief yakho ye-imeyili ngokufaka amafomu wokungena ekupheleni kwawo wonke amaposi, bese ufaka i-freebie kubhalisile abasha. Ngcono nakakhulu, faka uchungechunge lwe-autoresponder noma inkambo yamahhala ezokwehlisa ukukhathazeka kwabo, uphendule imibuzo yabo, futhi uqinisekise ukuthi uyabaluleka. Amathuluzi afana OptinMonster en kry GetResponse kuhle kakhulu ngalokhu.